BIG BREAKING : एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउदै, भारत बाट आयो यस्तो खतरनाक डिजाइन !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
BIG BREAKING : एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउदै, भारत बाट आयो यस्तो खतरनाक डिजाइन !
काठमाडौं – नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भित्री तयारी गरेको खुलासा भएको छ । ओलीले कांग्रेसका नेताहरूसँग नयाँ सरकार बनाउनेबारेमा गोप्य रुपमा छलफल गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेससँगको गोप्य छलफलका कारण माओवादीसँगको पार्टी एकीकरणमा ओली र एमालेका नेताहरूले खासै रुचि देखाएका थिएनन् । सोही कारण एमाले–माओवादी केन्द्रबीच लामो समयपछि वार्ता भएको हो । एमालेले रुचि नदेखाएपछि प्रचण्डले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग ओलीको बैंककमा साँठगाँठ भएको भनेर आफू निकटका नेताहरू समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनु अगाडि नै एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउने गरेर गृहकार्य भएको हो । तीनदिने राजकीय भ्रमणका बेला मोदीले कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेको भन्दै ओलीसँग नयाँदिल्लीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मोदीको आशय बुझेपछि ओलीले नेपाल फर्कनेवित्तिकै नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने वा उनीहरूसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेबारेमा परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘नरेन्द्र मोदीको आशय बुझेपछि एमाले र कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरेका छन् । कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको छ’, एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भारत भ्रमणपछि दुई पटक वार्ता भइसकेको छ ।’ ओलीलाई भेट्न देउवा दुई पटक बालुवाटार पुगेको थिए । ओलीसँग देउवाको भेट बारेमा नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
ओली र देउवाको गोप्य वार्तापछि एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका सीमित नेताहरू (किचनक्याबिनेत)ले नयाँ सरकार बनाउनेबारेमा भित्रभित्रै तयारी गरेका छन् । ओली–देउवाको किचन क्याबिनेटका सीमित व्यक्तिलाई मात्रै नयाँ सरकारको गृहकार्यका बारेमा जानकारी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नै बन्ने छन् । नेपाली कांग्रेसलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने सहमति भइसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सत्ताभन्दा बाहिर राख्ने तयारी ओली–देउवाले गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने हो भने दुईतिहाई पुग्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षका मागलाई संविधान संशोधन गरेर थामथुम पार्ने सकिन्छ ।’ भारतले संविधान संशोधनका लागि दवाव दिँदै आए पनि ओलीको भ्रमणका बेलामा यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा केही बोलेको थिएन । ओलीले नै मोदीलाई कन्भिन्स गरेपछि संशोधनको कुरा बाहिर नआएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट बारम्बार भइरहेको धम्की र असहयोगको राजनीतिका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साइजमा राख्न यो रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।